Sivile izinto ezininzi malunga neMicrosoft Dynamics AX Product eyenziwa ngu-AX7. Ngelixa i-AX7 iqhubela phambili ipakishe yokulungiswa kwayo kwangaphambili, kukho izinto ezintsha ezithakazelisayo malunga noPhuhliso lwe-AX7 omele uwazi.
Okwangoku ku-AX7 asinayo indawo yokusebenzela yaseMalXX / AX. Kunoko, ukuphuhliswa kwe-AX iMicrosoft isinike iSiboniso Studio.
I-AX7 incike kwiibinzana ezimbalwa, eziphantsi nje:
Icandelo: I-Element nayiphi na indawo yokuhlala kwindawo ye-AOT. I-Eg base-Enumeration ye-Base, i-EDT, iThebhu kunye njalo.
Bonisa: Umzekelo uwuqokelelo lwezakhi, esinazo kwiindawo ezidlulileyo.
Iimpahla: Isitywala iyunithi echitshiweyo, enokuthi ibe neeModeli ezahlukeneyo.
Ukwandisa: Iiprojekthi ziyakwindawo ehambelana nayo yonke into ekulindeleke ukwakha isicelo sakho.
Ngokungena kwe-AX7, ngoku singenza uphuhliso kwi-AX ngokusebenzisa izicwangciso ezimbini:
Ukugqithisa kuthetha ukuba kwimeko apho utshintshe nayiphi na indawo kwicandelo elingaphezulu, liza kugqithisa incazelo yalo, kwicala eliphantsi. Le nto yinto esenzayo kuze kube ngu-AX2012 ukutshintsha i-AX. Ivumela ngokukodwa ukulungiswa kwemethadatha kunye nekhowudi yomthombo kwisiseko esiphezulu.
Libhekisela kwimbono yokwandisa izakhi ezikhoyo, ngaphandle kokuxhatshaza abo babakho kwiindawo ezahlukeneyo. Oko kuthetha, iinqununu aziyi kuguqulwa, kunokuba izixhobo ziya kwandiswa. Ngokwenza izixhobo zokwandisa, uninzi lwezinto ezizimeleyo kunye nekhowudi zifakwe kwiindawo ezahlukeneyo zidibanise. Iqulethe ikhowudi edibeneyo okanye eguquliwe kwirekhodi yokunyusa.
Ngaphambi kokuba sisebenze kwi-Visual Studio kufuneka senze izicwangciso ezimbini eziza kwenza ukubandakanyeka kwentuthuko kunye ne-AX ilula.
Inyathelo 1: - Yiya ku-AX 7 Khetha
Inyathelo 2: - Setha iiprojekthi zokukhetha
Inyathelo 3: - Beka i-Options Editor Options
Inyathelo 4: - Hlela iindlela ezifanelekileyo zokuSebenza
Yithemba le nto yenza ukuba amava akho okuqhubela phambili kwe-MS AX7 azalisekise. Ukuthabatha kwiZiseko eziPhuhliso zeMicrosoft Dynamics AX7 kwi Koenig ziya kukuqhelanisa neziphumo ezininzi ezinokubakho kunye nehlabathi elitsha elinamathuba awunakucinga ukuba ukho.
Indlela yokugcina iiProjekthi ngexesha